काग तिहारको दिन १०० वर्ष पछि जुर्यो महासंयोग ! राशि अनुसार यसरी उठाउनुस् लाभ ! – Life Nepali
यसपालि धन्वन्तरी जयन्ती कार्तिक ९ गतेका दिन परेको छ। यसै दिन स्वास्थ्य के देवता भगवान धनवंतरि जयन्ति पनि परेको छ। शुक्रवार दिन परेको शुक्र प्रदोष समेत रहेको हुँदा ज्योतिषीहरुका अनुसार यस दिन लगभग १०० वर्ष पछि विशेष महासंयोग जुर्दै छ। शुक्र प्रदोष र धन त्रयोदशीको महासंयोग कार्तिक ९ गते जुर्न लागेको हुँदा यस दिन धेरै शुभ रहने ज्योतिषीहरु बताउँछन्। यस्तै यसै दिन सिद्धि योग समेत बन्दै छ। ज्योतिष शास्त्र अनुसार धनतेरस भएको दिन कुन राशी भएकोले के किन्न हुने र नहुने तथा पूजा गर्ने बिधि तल विस्तारमा दिईएको छ ।
मेष राशि भएकाले ( के किन्ने , पूजा कसरी गर्ने?)
सुन, चादी, भाडा, गहना, हिरा, विधुतीय उपकरण र कपडा किन्दा लाभ मिल्नेछ । मेष राशिभएकाहरुले धनतेरसमा लक्ष्मी भगवान्को कृपा पाउनका लागि साझको समयमा आफ्नो घरको मुख्य प्रबेशद्वारमा तेलको दियो बालेर त्यसलाई पुजा गर्नु पर्दछ। नरक चतुर्दशीको दिन आफ्नो घरको पूर्व दिशामा एक दियो बालेर राख्न राख्नुहोला । दीपावलीको दिन शुक्र यन्त्र र शनि यन्त्रको स्थापना गरेर पूजा गर्नुस् । सेतो कपडामा चन्दनको लेप लगाएर आफ्नो तिजोरीमा राख्नुहोस् ।
वृष राशि भएकाले ( के किन्ने , पूजा कसरी गर्ने?)
सुन, चादी, पीतल,हीरा, केशरी,कपडाहरु खरिद गर्न हुने तर सवारीसाधन, तेल, छालाको सामान, काठको फर्नीचर नकिन्दा राम्रो। साझको समयमा पीपलको ५ वोटा पातहरुलाई पहेंलो चन्दन लगाएर खोलामा बगाए धनको बचत हुने र फिजूलखर्च रोकिने छ । नरक चतुर्दशीको दिन आफ्नो घरको दक्षिण दिशामा एक दियो बालेर राख्न जरुरी रहेको छ । वृष राशि भएकाले दीपावलीको दिन महालक्ष्मी यन्त्रको स्थापना गरि पूजा गरे राम्रो हुने छ ।
मिथुन राशि भएकाले ( के किन्ने , पूजा कसरी गर्ने?)
जग्गा,जमिन,घर, सुन, चादी किन्न हुने तर कसैलाई पनि उधारो दिन हुदैन । मिथुन राशि भएकाले धनतेरसको दिन मा लक्ष्मीको कृपा पाउनका लागि बरको ५ वटा पातमा रातो चन्दन लगाएर रातो कपडामा केही सिक्कालाई बाधेर घरमा राख्नुपर्छ । नरक चतुर्दशीको दिन आफ्नो घरको पश्चिम दिशामा एक दियो बाल्नु पर्छ । दीपावली को दिन मिथुन राशि भएकाले घरमा चादीको श्रीयंत्र लेराए सुभ-लाभ हुन्छ । दीपावली को दिन एक जटा भएको नरिवललाई रातो कपडामा बाधेर आफ्नो तिजोरीमा राख्नु पर्छ । यसो गर्नाले धन लाभ हुन्छ, कुनै इच्छा पनि पूरा हुन्छ र परिवारमा सुख-शान्ति आउँछ ।
कर्कट राशि भएकाले ( के किन्ने , पूजा कसरी गर्ने?)
चादी,विधुतीय उपकरण, भाडा, काठको फर्नीचर किन्न हुने तर फलाम बाट बनेको कुनै पनि सामान किन्न नहुने।
माता लक्ष्मीको कृपा पाउनको लागि काग तिहार धनतेरसमा कर्कट राशि भएकाले साझ पीपलको रुख मुनि सर्सिउको तेल प्रयोग गरेर पंचमुखी दियो बाले लाभ हुने। नरक चतुर्दशीको दिन आफ्नो घरको उत्तर दिशामा एउटा दियो बाल्न जरुरी रहेको छ । दीपावली को दिन विष्णु मन्दिरमा एक पहेंलो त्रिकोण आकारको झण्डा चढाए आमदनी को स्रोत बढ्ने र आर्थिक स्थितिमा सुधार आउने छ ।
सिंह राशि भएकाले ( के किन्ने , पूजा कसरी गर्ने?)
सिंह राशि भएकाले धनतेरसमा आफ्नो नाम बाट कुनै पनि वस्तु खरदि नगर्दा राम्रो। शनिको बास भएको हुनाले सुन, फलाम र शेयरमा प्रबेश नगर्दा राम्रो। तामाको भाडा , कपडा र बच्चाको लागि कुनै पनि सामग्री नकिन्दा राम्रो। सिंह राशि भएकाले धनतेरसमा गाईलाई खाना खुवाए र आफ्नो घरको पूर्व दिशामा एक दियो बाले देखि कारोबारमा भएको नोक्सान बाट बच्ने र दरिद्रता हट्नेछ । काग तिहार बाट दीपावलीसम्म हरेक दिन आफ्नो घरको मुख्य द्वारको नजिक धेरै घिउ हालेर दियो बाले सुभ हुने छ ।
कन्या राशि भएकाले ( के किन्ने , पूजा कसरी गर्ने?)
धनतेरसको दिन कन्या राशिमा गजकेसरी योग बनेको हुनाले सुन, सम्पत्ति, हिरा, चादी , विधुतीय उपकरणहरु, गाडी,फर्नीचर किने देखि निकै नै लाभ मिल्ने छ भने कालो रंगको वस्तु वा कपडा किने देखि अशुभ हुने छ । कन्या राशि भएकाले धनतेरसमा आर्थिक स्थिरताको लागि माता लक्ष्मीको मन्दिर मा २ वोटा कमलगट्टेको माला चढाउनुस । नरक चतुर्दशीको दिन आफ्नो घरको दक्षिण दिशामा एक दियो बाल्न जरुरी छ । दीपावलीको दिन रातो कपडाले श्रीफललाई बाधेँर आफ्नो तिजोरीमा राखे आर्थिक संकट हट्ने छ र धन लाभ हुने छ ।
तुला राशि भएकाले ( के किन्ने , पूजा कसरी गर्ने?)
धनतेरसमा तुला राशि भएकाले लगानी गरे लाभ हुने छ । सुन, तामा, गाडी, चाँदी का समान खरीद गर्दा लाभ मिल्ने छ भने फलामको सामग्री नकिन्दा उत्तम। तुला राशि भएकाले ऋणबाट मुक्त हुनका लागि माता लक्ष्मीको मन्दिरमा नरिवल चढाउनूस ।नरक चतुर्दशीमा आफ्नो घरको पश्चिम दिशामा एक दियो बाल्नुहोस्। दीपावलीको दिन लक्ष्मी माताको मन्दिरमा कमल गट्टेको माला चढाए रोग, दुख र दरिद्रता सबै हटेर जान्छ र भौतिक सुख प्राप्त हुने छ ।
बृश्चिक राशि भएकाले ( के किन्ने , पूजा कसरी गर्ने?)
बृश्चिक राशि भएका मानिसहरुमा शनि को साढ़ेसात चलिरहेको हुदा काग तिहारको दिन आफ्नो नाममा कुनै पनि सामान खरिद नगर्दा राम्रो। फलामको सामान र सुन किन्न नहुने तर परिवारमा कसैको नाम बाट चाँदी, भाडा , पित्तल, कपडा,फर्नीचर, बिधुतिय उपकरण खरिद गर्दा लाभ हुने। बृश्चिक राशि भएकाहरुलाई घाटा बाट माथि आँउनका लागि मुर्दा घाट मा लगाइएको पानिको नाल या कुवाको पानि लेराएर पीपलको रुखमा चढाए लाभ हुने। नरक चतुर्दशीमा आफ्नो घरको उत्तर दिशामा एक दियो बाल्नु पर्द छ ।
धनु राशि भएकाले ( के किन्ने , पूजा कसरी गर्ने?)
धनु राशि भएकाहरुले घर,जग्गा,जमिन र बहुमुल्य वस्तु खरिद गर्दा लाभ मिल्ने छ । सुन, हिरा ,बहुमुल्य रत्न खरिद गर्दा पनि लाभ हुने छ . नरक चतुर्दशीमा आफ्नो घरको पूर्व दिशामा एक दियो बाल्नु होस् । दीपावली को दिन पीपल को पातमा लक्ष्मी मंत्र लेखेर आफ्नो तिजोरीमा राखे धन लाभ हुने छ ।
मकर राशि भएकाले ( के किन्ने , पूजा कसरी गर्ने?)
कपडा , सुन, चादी, गाडी , किताब, बहुमुल्य रत्न, चादीको भाडा खरिद गर्दा धेरै लाभ मिल्ने छ भने मकर राशि भएकाले विधुतीय उपकरण र घर,जग्गामा लगानी नगर्दा लाभ हुनेछ । मकर राशि भएकाले आफ्नो आय स्रोत बढाउनका लागि सर्सिउको तेलमा दियो बल्नु पर्दछ । नरक चतुर्दशीमा आफ्नो घरको दक्षिण दिशामा एक दियो बाल्नुहोस्दी पावलीको दिन शनि यन्त्र र मंगल यन्त्रको स्थापना गरि पूजा गर्नु पर्द छ । शनि यन्त्र छ भने घरको पश्चिम दिशामा निलो कपडाले बाधेर राख्नुहोस। दीपावलीको दिन रातो कपडामा नरिवल राखेर आफ्नो तिजोरीमा राखे माता लक्ष्मीको घरमा स्थायी वास हुने छ ।
कुम्भ राशि भएकाले ( के किन्ने , पूजा कसरी गर्ने?)
धनतेरसमा कुम्भ राशि भएकाले लगानी गरे निकै नै लाभहुने छ । घर, जग्गा , सवारीसाधन, किताब, विधुतीय उपकरण,फर्नीचर खरिद गर्दा निकै सुभ हुने तर सुन वा बहुमुल्य रत्न भने खरिद गर्न नहुने। कुंभ राशि हुनेले स्थायी सुख-समृद्धिको लागि धनतेरसमा आफ्नो परिवारसँग लक्ष्मी-गणेश र कुबेर जी को पूजा गर्नुहोस्न। रक चतुर्दशीमा आफ्नो घरको पश्चिम दिशामा एक दियो बाल्नुहोस्। दिपावलीको रात नरिवलको खबटामा घिउ हालेर दियो बाले लक्ष्मीको घरमा स्थायी वास हुने छ ।
मीन राशि भएकाले ( के किन्ने , पूजा कसरी गर्ने?)
सुनको आभूषण, चादीको भाडा, घर-जग्गा खरदि गर्दा निकै लाभ रहेको तर शेयर मा लगानी र अरुलाई उधारो दिए असुभ हुने। मीन राशि भएकाले आफ्नो कारोबारमा फाईदा कमाउनु छ भने कुनै दुई वृक्ष रोपेर त्यसको सधै हेरविचार गर्ने संग्कल्प लिनुहोस्। नरक चतुर्दशीमा आफ्नो घरको उत्तर दिशामा एक दियो बाल्नुहोस्। दीपावलीको दिन पहेलो कपडामा बेसार राखी त्यसलाई ११ वोटा गाठो बनाएर आफ्नो तिजोरी मा राख्नुहोस। माता लक्ष्मीको मन्दिरमा अगरबत्तीको दान गर्नाले कारोबार र काममा उन्नति मिल्ने छ ।
पञ्चाङ्ग अनुसार प्रत्येक वर्ष कार्तिक कृष्ण प’क्षको त्र’योदशीका अथवा काग तिहारका दिन ध’नवन्तरी त्र’योदशी अर्थात ध’नतेरस मनाउने गरिन्छ । धन त्र’योदशी र ध’नतेरस पनि यसै दिनलाई भन्ने गरिन्छ । यो दिन मू’लतः आ’युर्वेदका प्र’वर्तक ध’न्वन्तरि र धनका देवता कुबेरको ज’न्मोत्सव मनाउने प’र्व हो । ध’नतेरसका दिन नेपालको तराई क्षे’त्रमा न’याँ-नयाँ भाँ’डाकुडा र सुनचाँदीका ग’रगहना कि’नमेल गर्ने प’रम्परा र’ही आएको छ ।ध’नतेरसको दिन सा’मानहरु कि’न्ने र दी’पदान गर्ने दिन अर्थात् ध’नतेरस पर्व साथै काग तिहार पनि हो ।
Previous श्री पाथिभरा माताको दर्शन गरि आजको राशिफल हेर्नुहोस् !
Next पाथिभरा माताले दर्शन गरि ! आज शुक्रबारको राशिफल !